भारत, नेपाल अनि भविष्य- विचार - कान्तिपुर समाचार
मंसिर ८, २०७७ महेन्द्र पी‍. लामा
काठमाडौँ — भारत–नेपाल कूटनीतिक सम्बन्ध चिसिनु र तातिनु एउटा ऐतिहासिक प्रवृत्ति नै भएर गएको छ । धेरैपल्ट निकै तल नै झर्‍यो यो सम्बन्ध, गत छ–सात दशकमा हामीले यही नै देख्यौं । अनि त फेरि सम्बन्धमा उज्यालोपन मात्रै नआएर, अझै व्यापक र गहिरो पनि भएको देख्यौं ।
भारत–नेपाल सम्बन्ध सीमित हुनै सक्तैन । उज्यालैउज्यालो छ अघि । भारतका विदेशसचिव हर्षवर्द्धन शृंगलाको आगामी नेपाल भ्रमणले यही कुरा इंगित गर्दछ । अति नै दूरगामी र प्रस्ट विचार भएका शृंगलाले बंगलादेश, अमेरिका, थाइल्यान्ड र अन्य राष्ट्रहरूसँगको भारतको सम्बन्धमा ल्याएका सग्ला परिवर्तन र ठोस उपलब्धिहरूको चारैतिर सराहना गरिन्छ । शृंगलाको कूटनीतिक क्षमता र ज्ञानको आभास उनले हालैमा गरेको युरोप, बर्मा, माल्दिभ्स आदि राष्ट्रहरूको भ्रमणमा पाइएका उपलब्धिहरूमा पाइन्छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र विदेशमन्त्री एस. जयशंकरको आस्था र भरोसाकै कारण शृंगला भारत–नेपाल सम्बन्धमा एउटा नयाँ अध्यायको सुरुआत गर्ने अभिभारा लिएर नेपाल भ्रमण गर्दै छन् । यस्तै व्यक्तित्वले नै भारत–नेपाल सम्बन्धको मर्म बुझेर, दुई राष्ट्रहरूबीच फेरि प्रगाढ आत्मीयताको ज्योति छर्नेछन् भनी सबैले आशा गरेका छन् ।
प्रकाशित : मंसिर ८, २०७७ १७:२४
कांग्रेस महामन्त्रीको प्रश्‍न- अमेरिकामा चुनाव हुने कांग्रेसको हुन नसक्ने ?
मंसिर ८, २०७७ नारायण शर्मा
नवलपरासी — नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले अमेरिका र बिहारमा निर्वाचन हुने तर नेपाली कांग्रेसको चुनाव हुन नसक्ने अवस्थाले आफू चकित भएको बताएका छन् ।
उनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाप्रति लक्षित गर्दै नेपाली कांग्रेस पार्टीको निर्वाचन सार्ने नेतृत्वको मनसायले पार्टी जीवन समाप्त हुने बताए ।
हरेक निर्वाचनले परिवर्तन दिने चर्चा गर्दै उनले अमेरिका र बिहारमा सम्पन्न आम निर्वाचनले नेपाली कांग्रेसको अधिवेशन समयमै गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिएको सुनाए । पार्टी अधिवेशन कुनै बहानामा पनि सार्न नहुने उनले जिकिर गरे ।
कोरोना अस्थायी अस्पताल रजहर (प्राकृतिक चिकित्सालय)मा आयोजित रेडियो मध्यबिन्दु एफएमको १२ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा डा. कोइरालाले उक्त कुरा बताएका हुन् । कार्यक्रममा काेइरालाले चिकित्सालयलाई स्वास्थ्य सामाग्री पनि हस्तान्तरण गरे ।
प्रकाशित : मंसिर ८, २०७७ १७:२०